Russian Federation - zwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni. endaweni yayo - one-sixth ezweni bawo wonke umhlaba, futhi abantu abase - abantu abangaphezu kuka-143 kwezigidi ezingu .. Ubude imingcele Russia - 63 993 km. imingcele yezizwe, IRussia nge emazweni amaningi aseYurophu futhi Asian. Ntshonalanga amanga komngcele eNorway 219,1 km, eningizimu komngcele Finland e 1325,8 amakhilomitha. Kuleli zinga emngceleni waseRussia nge emazweni zaseScandinavia uphela.
Ngaphezu kwalokho eningizimu eMfuleni Narva (noma Narva) sihamba komngcele Estonia ukuba 466,8 amakhilomitha ke emngceleni Latvian, 270. Russian Federation isimo komngcele ePoland naseLithuania egcina Kaliningrad (Kenigsberg esikhathini esidlule), kanye endaweni yayo futhi 236 288 amakhilomitha ngokulandelana.
Ukulandela umngcele - ne Eastern Slavic wethu nodadewethu - Ukraine ngo-1925 futhi Belarus km - e 1239 km.
Umngcele nalo lonke amazwe ayengaphansi kweSoviet: Georgia, South Ossetia Abkhazia futhi Azerbaijan. Kwenzeka isimanga ngoba ngesikhathi ngobufushane yayo eyisihlobo umngcele amakhulu eminyaka baletha eziningi ababusi Russian ukukhathazeka. Kanye nokuvikelwa komngcele isimo Russian Federation kule ndawo okufunile njalo umzamo omkhulu.
Cishe ingxenye yabo bonke umngcele oseningizimu liwumngcele nge Kazakhstan - 7512 km. Kazakhstan - ocebile kakhulu, ezinkulu kanye ethakazelisayo evela kumfundi iphuzu kwamasiko umbono wezwe.
Bese kuba khona incane - km 12 kuphela - komngcele China. Leli zwe ihlanganisa yonke imingcele empumalanga, eningizimu nasentshonalanga ye eMongolia futhi iza mbeni Russia at 4209 km. Umkhawulo ne owawuke waba namandla, kodwa manje elahlekile emaqeleni ehlane yezwe - Mongolia - 3485.
Sabe umkhawulo neNyakatho Korea, Democratic Yabantu Republic of Korea, noma North Korea - 39,4 amakhilomitha.
Russia iya izilwandle emithathu ezilwandle eziningi, futhi kakhulu has a umngcele nge ahlukene. umngcele State of the Russian Federation phezu kolwandle: Norway (23 km), Finland (54.1 km), Estonia (150 km), Lithuania (e Kaliningrad - 22 km), Poland (I-Kaliningrad - 32 km), Ukraine (320 km) Georgia (22), Azerbaijan (22), Kazakhstan (85.9 km), North Korea (22.1), Japan (194.3), e-USA (49 km).
Ephambi kwezinduna isibalo esingangaleso enkulu imingcele namazwe ehlukene elithola abo kanye nebubi.
Okokuqala, lena enkulu engaba yezokuthutha. Nge ukuthuthukiswa kohlelo air travel, a emafektri ezazinakho konke, kuyashesha futhi branched umbiko nojantshi angazuza imali ezinhle ku-Logistics kwezimpahla amazwe evela e-Asia e-Europe, i-Afrika, eMelika, futhi okuphambene nalokho. Ngeshwa for ukusebenza esitebeleni kohlelo eRussia kakhulu kabi athuthukile ezokuthutha izindawo.
Okwesibili, ithuba elihle ngokubambisana ngalo namazwe angomakhelwane. izivakashi Russian angaya ngaphandle kwezinkinga emazweni amaningi, kukhona amathuba kakhulu kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle.
umngcele State of the Russian Federation ungaba nenkinga ngenxa ngokwezinga layo: uma impi, nizitholele eziningi izitha, kunzima ukulawula ukugeleza esisuka of kuleli ngokungemthetho kusukela yezwe yesithathu, kuthatha eziningi umzamo futhi imali umsebenzi wokudala amasevisi umngcele.
I Russian Federation has endaweni ngobukhulu futhi umngcele ende kunazo zonke emhlabeni. Kanye ubude umngcele phezu yenkabazwe sidlula zonke sezulu esihlukahlukene futhi wonke sezigaba zezikhathi.
Paris emhlabeni, izimo zalo kanye nemiphumela
Yempi British "Dreadnought"
Kusofa "Senator": sithombe konke
Pepper usimende. Izinkomba kanye contraindications
Izindlela eziningana ukupheka zucchini
Sundresses Long - i hit eliphelele ehlobo.
Ubuso - Iyini? okusho
Stores "zarina" e Moscow, ikheli kanye ibalazwe indawo
"Syamozero" - ukuzilibazisa isikhungo e Karelia. Incazelo, ukubuyekezwa, intengo
Snudy. Ukwaluka izinaliti ukufunda obumbene izesekeli stylish efudumele
Indlela imali Yandex Imali?
Ukuphila okusha: isiginci sikagesi kusukela skateboard ubudala
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe basithathe ukuze basinde emaphandleni "Maynkraft"?